रामचन्द्र र शशांकलाई पहिले छाडिसकेको हो, यसपालि मै सभापति उठ्छु: प्रकाशमान सिंह (भिडिओ) :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
यही मंसिर २४ देखि काठमाडौंमा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हुँदैछ। उद्घाटनको भोलिपल्ट सभापतिदेखि पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यमा उठ्नेले उम्मेदवारी दिनुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। २०७२ सालमा भएको १३औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई सभापतिमा र शशांक कोइरालालाई महामन्त्रीमा सहयोग गरेकाले अब आफू नै सभापति उठ्ने निचोडमा सिंह पुगेका छन्।
सभापतिमा उम्मेदवारी दिन आफू 'नेचुरल उम्मेदवार' भएको सिंह बताउँछन्।
महाधिवेशनको संघारमा सिंहसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
महाधिवेशन आउन चार/पाँच दिन मात्रै बाँकी छ, यसपटक कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ?
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन आउने शनिबार हो। मैले सुरूदेखि भन्दै आएको छु- म पार्टी सभापतिका लागि नेचुरल उम्मेदवार हुँ। मैले साधारण पार्टी कार्यकर्ताबाट काम सुरू गरेर केन्द्रीय उपसभापतिसम्म भइसकेँ। पदमा बस्ने मात्र होइन, काम पनि गरेँ।
यसपटक महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु। मैले पार्टीमा लामो समय काम गरेकाले पनि कमजोरी थाहा छ। म सभापति भएर पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन चाहन्छु। जनताको भरपर्दो पार्टी बनाउने योजना पनि छ।
संस्थापन इतरबाट सभापतिमा एक जना मात्रै उम्मेदवार दिन छलफल भएका थिए। अझै पनि छलफल जारी छ कि एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिने हो?
वर्तमान नेतृत्वबाट अब पार्टी चल्दैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं। नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू एकठाउँ उभिएका छौं र हामीबीच छलफल पनि भइरहेको छ। तर यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यसमा आकांक्षी धेरै हुन्छन्। थुप्रै नेताहरू पनि छन्। हामी परामर्श गरिरहेका छौं, समय परिपक्व नभएसम्म निष्कर्ष निस्कँदैन। यही मंसिर २५ गते मनोनयन दर्ता गर्ने समय छ। त्योभन्दा एक/दुई दिन अगाडिसम्म त के हुन्छ भन्ने निर्णय भइसक्छ।
संस्थापन इतरबाट सर्वसम्मत तपाईं उम्मेदवार हुनु भएन भने सभापतिमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने?
म नेचुरल उम्मेदवार हुँ। मलाई न्याय चाहियो। सबैलाई न्याय हुनुपर्छ। ठिक मानिसलाई ठिक ठाउँमा राखेर जानुपर्छ। मेरो अनुभव पनि छ। पार्टीभित्र पनि अवसर नपाएकालाई अवसर दिनुपर्छ।
भर्खरै प्रदेश अधिवेशन सकियो। त्यसको मत हेर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा बलियो देखिनुहुन्छ। संस्थापन इतरका नेता एक हुनुभएन भने त जित्न गाह्रो पर्छ होला!
यसपालि विधि र नियम पालना नगरी क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ। प्रतिबन्धित अवस्थादेखि काम गरेकाहरूलाई अन्याय भएको छ। सभापति देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुरालाई नै हेरौं न- अधिवेशन निष्पक्ष र धाँधलीरहित भइरहेको छैन।
एउटा कुरा ख्याल गर्नुस्- अनिकालमा बीउ जोगाऔं र हुलमुलमा ज्यान जोगाऔं भन्छन् तर पार्टी विधिअनुसार चलेको छैन। हुलमुल भइरहेको छ।
सबैले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन कहाँ कोसँग मिलेर आएको छ। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र पार्टी सभापति छान्दा आफ्नो भविष्य सबैले सोच्छ। विवेक प्रयोग गर्छन्। जनताले विश्वास नगरेका नेता ल्याएर कसैले आफ्नो भविष्य अन्धकार बनाउँछ जस्तो लाग्दैन। कांग्रेस कमजोर भएको खण्डमा संविधान पनि जोखिममा पर्छ भन्ने त कम्युनिस्ट पार्टीले संसद विघटन गरेर देखायो। त्यसैले समयको माग बुझेको नेता हुनुपर्छ, काम गर्न सक्ने नेता हुनुपर्छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि विवेक प्रयोग गर्नभन्दा गुटको छायाँमा रूमलिएका छन् भन्ने छ नि!
पार्टी नर्मल अवस्थामा छैन। अस्तव्यस्त भइरहेको छ। जसरी पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउने काम भइरहेका छन्। पार्टी नेतृत्व ठिक भए पो पार्टी ठिक र जनताले पनि पत्याउँछ। मलाई विश्वास छ- महाधिवेशन प्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गर्छन्।
कांग्रेसमा एउटा छलफल पनि चलेको रहेछ, जसका पक्षमा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला सभापति छन् उनीहरूकै राय सल्लाहमा उम्मेदवार छान्ने भन्ने रहेछ, तपाईंलाई यो स्वीकार छ?
फरकफरक तरिका र तर्क आएका छन्। उम्मेदवार छान्ने तरिका ठिक हुनुपर्छ।
तपाईं र शेखर कोइरालाबीच पावर सेयरिङको कुरा पनि हुने गर्दो रहेछ, त्यो के हो?
हुन्छ नि! पावर सेयरिङ भनेको सभापति एक जना हुने, अरू पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री लगायत पद सम्हाल्ने, त्यही हो।
तपाईंलाई काठमाडौं बाहिरकाले चिन्दैनन् भनेर महामन्त्री शशांक कोइलालाको आरोप छ!
उहाँले नै मैले त्यस्तो भनेको होइन भनिसक्नुभयो। मलाई चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने कुरा त कांग्रेसमा मैले यति लामो समय गरेको काम र निर्वाचित भएका कुराले बताउँछ। १०औं महाधिवेशनमा तेस्रो धेरै मत आएको हो। १२औंमा महामन्त्री उठ्दा सभापतिको भन्दा धेरै मत आएकै हो। त्यसबाट नै देखाउँछ नि चिन्छ कि चिन्दैन भनेर।
पौडेल पक्षले सर्वसम्मत उम्मेदवार छान्दा तपाईं पर्नुभएन भने अरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
मैले भनेँ, म नेचुरल उम्मेदवार हुँ। यसअगाडि रामचन्द्र पौडेललाई छाडेको हो, शशांक कोइरालालाई छाडेको हो। धेरै मानिसले तिमी त गणेशमानका छोरा, के गरेर बसेको भन्छन्। नसक्नेलाई अगाडि बढाएर मात्रै हुन्न, रिस्क लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। अन्यायमा परेका कार्यकर्तालाई न्यान दिन र विधिसम्मत पार्टी चलाउन म सक्छु।
तपाईं, विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइरालाले एकअर्काका घरमा गएर छलफल गर्नुभयो, अहिले तपाईंहरू एकै कित्तामा हुनुहुन्छ कि आफ्नो सुर गर्नुभयो?
को के सुरमा छ भन्ने तपाईंहरूले न्युजमा ल्याइरहनुभएकै छ। १४औं महाधिवेशनमा शीर्ष नेतालाई सम्मानजनक तवरले आराम गर्न दिएर नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्‍यो र अभिभारा हामीलाई बोकाउनुपर्‍यो भन्ने नै हो।
अन्तिममा तपाईं सभापति उम्मेदवार हुनुभयो भने किन भोट हाल्ने?
सबै राम्रो देखिए पनि कांग्रेस पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। वडादेखि केन्द्रसम्म विधि र नियमअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमी भइरहेको छ। म त्यो कमी हुन्न दिन्न।
महाधिवेशन र निर्वाचनको समयमा कांग्रेस देख्ने र त्यो सकेपछि कांग्रेस सुत्ने प्रवृत्ति पनि छ। म पार्टीलाई सक्रिय र जीवन्त बनाउँछु।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८, १०:२१:००